Daawo: C/rashiid xidig iyo xildhibaano ka tirsan madasha horusocod oo maanta muqdisho uga dhawaaqay go’aan cusub oo….. | Kismaayo24 News Agency
Daawo: C/rashiid xidig iyo xildhibaano ka tirsan madasha horusocod oo maanta muqdisho uga dhawaaqay go’aan cusub oo…..
Thursday May 18, 2017 - 1:03 under Somali News by Tifaftiraha K24
Magaalada muqdisho waxaa maanta kulan ku yeeshay xildhibaanadii dhawaan magaalada nairobi uga dhawaaqay madal cusub oo loogu magacsadar horsocod kaasi oo ay ku mideysanyihiin xildhibaano kor u dhaafaya 100 xildhibaan.
Kulankaan ayaa waxa ay xildhibaanada ku shaacinayeen in madasha horusocod aysan aheyn mid lagu mucaaradaayo dowladda federaalka iyagoona beeniyay wararka maalmahan warbaahinta ay qoreysay oo ku aadaneyd in madasha nairobi looga dhawaaqay ay dowaldda farmaajo mucaaradsantahay kana diyaarineyso mooshin xil ka qaadis ah.
Xubnaha madasha ayaa sheegay in madashaan ay tahay mid looga gudbi doono nidaamka ku dhisan qabaliga ee 4.5 waxaana ay sheegeen in dhamaan soomalida oo dhan ay madashaan ka qeyb gali karaan.
Guddoomiyaha KMG ee madasha horusocod xildhibaan c/rashiid xidig oo kulankaan shir guddoominaayay ayaa warbaahinta u qabtay shir jaraa’id oo uu ku faah faahinaayay madashaan cusub iyo waxyaabaha loo aas aasay in ay qabatio.
“Anaga qolo mucaarad ma nihin, dowladda ma mucaaradsani, kamana keeneyno mooshin Ra’iisul Wasaaraha iyo Madaxweynaha, waxaa isu baheysanay waa in dalka la hormariyo, horayna loo socdo”ayuu yiri xildhibaan xidig.
“Maadaama dalkan la rabo inuu horusocod, lagana gudbo nidaamka 4.5, waxaa rabnaa inaan noqono xisbi dalkan ka dhisan, xildhibaan kastana waxaa laga rabaa in labo sano kaddib inuu xisbi ka tirsanaado” ayuu hadalkiisa intaa sii raaciyay guddoomiye c/rashiid xidig.
Madashaan ayaa furnaan doonta ilaa bisha july sida mas;uuliyiinta madasha ay ka dhawaajiyeen waxaana dadka ay la wadaagaan in qofkasto madashan ay u furantahay in uu kusoo biiro xubinna ka noqdo.
Xildhibaano kor u dhaafaya 100 xildhibaan ayaa dhawaan magaalada nairobi uga dhawaaqay madal siyaasadeed ay ugu magacdareen horusocod kaasi oo ay ku mideysanyihiin xildhibaano laba gole ka tirsan waxaana inbadan la hadal haayay in madashaan ay tahay mid dowladda farmaajo iyo kheyre ku abuuri doonta mowjado mucaarad ah balse xubnaha madasha ayaa maanta muqdisho ka sheegay in aysan mucaarad aheyn dowladdana ka soo horjeedin.